Paoma ny Repoblika Demokratika Kongo hanatevin-daharana ny Community Africa East
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Paoma ny Repoblika Demokratika Kongo hanatevin-daharana ny Community Africa East
Tamin'ny fihaonana an-tampony natao ny faran'ny herinandro dia nandinika ny fangatahana nataon'ny DRC ireo Lehiben'ny fanjakana 6 EAC hanatevin-daharana ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina ara-toekarena mitombo haingana indrindra ary nandidy ny filankevitry ny minisitra hanara-maso haingana ny asa fitoriana.
Ny DRC dia heverina ho firenena manankarena indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny harena voajanahary, ny fizahan-tany amin'ny fizahantany ho loharano lehibe izay mbola tsy voavolavola.
Ny filankevitra afrikana atsinanana dia nanao fanadihadiana ary nahita fa misy tombony lehibe amin'ny fananana DRC ho mpikambana fahafito ao amin'ny EAC.
Ny vokatra fizahan-tany iraisana miaraka amin'ireo firenena mifanila volo amin'ny DRC dia fotoana ahafahana manatsara ny fizahan-tany efa misy ho an'ny faritra Great Lakes ao Afrika.
Voasokajy ho firenena faharoa lehibe indrindra atsy Afrika, ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) dia nangataka ny hiditra ao amin'ny blok Africa Community Community (EAC), hetsika izay hanafainganana ny fampidirana ireo firenena afrikanina ho tsena tokana sy toerana fizahan-tany kaontinanta.
Ny filohan'ny DRC, Andriamatoa Felix Tshisekedi, dia nanoratra taratasy ho an'ny Lehiben'ny fanjakana EAC izay nangataka mba ho anisan'ny fampidirina ara-toekarena ao amin'ny faritra, dingana iray mialoha hamoronana bloc fampidirana asa lehibe indrindra any Afrika Atsinanana sy afovoany.
Lehiben'ny fanjakana EAC enina no nivory nandritra ny fihaonana an-tampony ny faran'ny herinandro izay namoahana kominio avy eo: "Ny fihaonambe dia nandinika ny fangatahana nataon'ny Repoblika Demokratikan'i Congo hanatevin-daharana ny Vondron'olona Afrikana Tatsinanana ary nibaiko ny filankevitra mba hanao asa fitoriana haingana ao amin'ny RDC mifanaraka amin'ny fomba EAC momba ny fampidirana mpikambana vaovao ao amin'ny EAC. "
Ity fivoarana ity dia tonga andro vitsivitsy taorian'ny nanoroan'ny sehatra tsy miankina Afrikanina Tatsinanana ny Lehiben'ny fanjakana EAC hanara-maso haingana ny fidiran'ny DRC ao amin'ny blok EAC.
Ny East Africa Business Council (EABC) dia nanao fanadihadiana tamin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola sy ara-pitaovana avy amin'ny governemanta alemanina tamin'ny taona lasa ary avy eo nahita fa misy tombony lehibe amin'ny fananana DRC ho mpikambana fahafito ao amin'ny EAC.
Ny Repoblika Demokratikan'i Kongo dia heverina ho firenena manankarena indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny harena voajanahary, ny fizahan-tany amin'ny fizahantany ho loharano lehibe iray izay mbola tsy voavolavola.
Aorian'ny fidirana amin'ny bloc EAC, DRC dia ho lasa iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza atsy Afrika Atsinanana mba hisarika ny mpandeha iraisampirenena eo ambanin'ny paikadim-barotra efa napetraka tamin'ny alàlan'ny fandrindrana ny Sekretariatin'ny EAC.
Miorina eo afovoan'i Afrika, ny DRC dia hita eo amin'ny Equator ary eo amin'ny sampanan-dalana mankany Afrika atsimo, afovoany ary atsinanana. Ny fizahan-tany intra-regional dia mampifandray ireo firenena afrikanina 9 mifanila amin'ity firenena ity.
Ny vokatra fizahan-tany mahazatra miaraka amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina amin'i DRC miaraka amin'ny fanitarana ireo toerana isam-paritra dia fotoana ahafahana manatsara ny fizahan-tany efa misy ho an'ny faritra Great Lakes ao Afrika.
Ny DRC dia manintona ireo mpizahatany satria nandrakitra fitomboan'ny fivezivezena mifindra noho ny Diaspora kongoley sy ireo mpitsidika raharaham-barotra iraisam-pirenena ary ireo tia kolontsaina.
Ny fotoanan'ny fizahan-tany tsy manam-paharoa an'ny DRC, ao anatin'izany ny tahiry biby dia, kolontsaina indizena, ary zava-mahatalanjona ara-jeolojika izay nametraka ity firenena afrikana ity ho firenena tonga lafatra ho an'ireo mpizahatany tia natiora.
Kongo dia manolotra karazana fizahan-tany mpizahatany any amin'ny faritany isan-karazany manomboka amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny safaris ka hatrany amin'ireo rafitra ara-kolontsaina, ankoatry ny fivezivezena sy ny fitsangatsanganana.
Misy karazana endemika 4 hita any Kongo. Ireo no gorila tendrombohitra, okapi, bonobos, ary ny vorombola Kongoley.
Ny Valan-javaboary Virunga dia malaza amin'ny gorila tendrombohitra sy karazam-biby hafa dia tsy dia misy any amin'ny faritra hafa atsy Afrika. Ny ala ekoatera sy ny tontolo iainana ekena voajanahary dia mahatonga ny DRC ho toeran'ireo mpizahatany tsara sy manintona indrindra eto Afrika.
Ny mozika kongoley noforonin'ireo mpitendry zavamaneno malaza no lova ara-kolotsaina hafa izay nahatonga an'i DRC ho mozika malaza afrikanina, ankoatry ny loharanom-biby, izay ankamaroan'ny gorila an-tendrombohitra.
Taorian'ny nidirany tao amin'ny East Africa Community (EAC) Bloc, hiteraka fotoana bebe kokoa amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany i Kongo amin'ny alàlan'ny paikadim-barotra tokana misy ankehitriny, mba hamidy ny faritra Afrika Atsinanana ho toy ny bloc tsena fizahan-tany. Ny fandraisana andraikitra ara-barotra isam-paritra dia ampahany amin'ny paikady hivarotana an'i Afrika ho tokan-tena fizahan-tany eo ambanin'ny elo an'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB).
Miorina any Afrika Atsimo, ny Birao Afrikana fizahan-tany dia nanao fampielezan-kevitra ho an'ny marketing sy fampiroboroboana an'i Afrika ho tokan-toerana fizahan-tany tokana, sady manohana ny fivezivezena malalaka an'ny Afrikana manerana ny kaontinanta ary koa ny lobbing ho an'ny hetsiky ny mpitsidika manerana ny firenena samihafa eto Afrika .
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia fikambanana iray izay ankalazaina eran-tany noho ny asany ho toy ny mpanentana amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra afrikana.
Amazon dia nanova mangina ny sary famantarana ny app 'Hitler's smirk'